Azoko atao ve ny manatsotra ny dingan'ny fananganana rindranasa mampiasa rakitsoratra bakalorea?
Manontany tena ve ianao hoe ahoana no hahazoam-bolana vaovao amin'ny sary? Fomba fananganana rohy dia maro ireo webmasters tsy mahalala na mahatsapa fotsiny ny heriny. Na izany aza, raha ny tena marina, sary iray an-tserasera tokana dia mety hahazoana rohy an'arivony. Ny fifantohana amin'ny fanorenana rohy mifototra amin'ny rohy dia mety hahatonga anao hanadino ny iray amin'ireo tetikady fanorenana rohy indrindra indrindra - fanorenana rohy sary. Azonao atao ny mampita fampahalalana mahasoa amin'ny alalan'ny votoaty hita maso toy ny infografika, horonan-tsary, sary, ary ny sisa.
Andeha isika handinika akaiky ny teknolojia fananganana rohy izay hanampy anao hamorona rohy avy amin'ny sary - most beautiful party dresses.
Ahoana no ahafahana mamorona sary izay manintona ny fifamoivoizana sy ny backlinks?
Voalohany indrindra, te-hilaza ny dikan'ny fahitana maso aho. Ny fananana hita maso dia manana hery bebe kokoa noho ny teny mitovy amin'ny sary. Raha efa vita tsara izy ireo, dia manome fahitana, mazava, na hevi-baovao momba ny lohahevitra tiany indrindra.
Mba hisarihana ny fifamoivoizana amin'ny loharano ao amin'ny Internet, dia mila mamorona fantsona hita maso ianao amin'ny fanangonana teny filamatra. Ny mpampiasa dia mazàna mizara fanambarana, sangisangy ary memes. Na izany aza, raha tsy mpanamboatra ianao, dia mety ho sarotra aminao ny mametraka ny zava-drehetra. Na izany aza dia misy foana ny lalana. Azonao atao ny mampiasa ny tolotra mora toy ny Fiverr mba hamoronana sary tsotra. Ankoatra izany, afaka mahita ny gigs samihafa ianao. Hanaiky izy ireo hamorona tantara an-tsehatra tsotra ho an'ny rakitra afa-po amin'ny vidiny lafo vidy ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, raha mila zavatra sarotra kokoa ianao, izany dia mitaky fikarakarana matihanina, dia mila manofa trano ianao.
Sarotra ny milaza hoe mety hahasarika tranokala be dia be ny sary na tsia, nefa azo antoka fa hanampy azy hahatakatra ny hevitra ao ambadiky ny lahatsoratra.
Ahoana no fiasan'ny orinasan-tserasera?
Ny fitaovam-baovaon'olon-kery dia fitaovam-piadiana matanjaka ho an'ny fametahana backlinks. Mampiasa azy io ny webmasters mba hanakanana ny mpamaky sy hampaharitra azy ireo amin'ny marika. Ny orinasa madinika dia mametraka ny infografika amin'ny votoatiny mba hahazoana rohy tafiditra amin'ny mpilalao matihanina.
Voalohany indrindra, mila manao fikarohana Google ianao mba hahitana ny informatika mifandraika amin'ny sehatra indostrialy. Ampiasao ireto fanontaniana manaraka ireto mba hahitana ny votoatiny marina - "keyword" + "infographic"; "Fitadiavam-bidy tsara indrindra"; "Keyword infographics. "Diniho avy eo ireo vokatra azo ary hahita ny tsara indrindra.
Raha toa ka napetraka tamina alokaloka somary tsy mazava tsara ny raharaham-barotra, dia azonao atao ny mampiasa anaran-tsarimihetsika sasany izay ahitanao ny zava-drehetra. Ny iray amin'ireo mpampahalala vaovao fanta-daza dia Visual. hahatratrarana sy Pinterest.
Raha vantany vao nahazo ny sary mety ianao, dia mila mitady lohahevitra izay tsara indrindra ho an'ny nichanao. Ampiasao ireo sehatra voalaza etsy ambony ireo, azonao atao ny manasitrana ny duds ary mahita ny mety ho karazana infographic izay lasa malaza.
Eo amin'ny sehatra manaraka, mila mampifandray ny angona ianao. Satria ny tanjonao voalohany dia ny hamoaka ny pikantsary avy amin'ny loharanom-baovao maro mifandraika amin'ny niche, mila manangona ny fampahalalanao amim-pitandremana ianao. Ary raha tsy dia mahagaga ny fampahalalana momba anao, dia tsy azo inoana fa alefa any Forbes na any Harvard. Edu. Na izany aza, dia azo ampifandraisina amin'ny loharanom-baovao azo itokisana ao amin'ny indostrianao izany.